HomeWararka MaantaSuarez: Iniesta Weeye Ninka Iga Yaabiyaa
Luis Suarez ayaa tilmaamay inay adag tahay sida loo kala saari karo xidigaha Cristiano Ronaldo iyo Leonel Messi ee mid kamid ah loo odhan karo wuu ka fiican yahay kan kale , wuxuuse hoosta ka xariiqay in ninka isaga ka yaabiyaa ee uu aadka ula dhaco qaab ciyaareedkiisu uu yahay xidiga khadka dhexe ee kooxda Barcelona, Andres Iniesta.
“Messi iyo Ronaldo waa ciyaaryahano gebi ahaanba aad u kala duwan,”ayuu Suarez ku yidhi jariidada Helden magazine. “Ma odhan karo kaasaa fiican labadooda.
“Messi wuxuu leeyahay farsamo aad u qurux badan, goolal badan buu dhaliyaa, waxaa kaluu leeyahay xarfad aad u cajiib ah oo uu ku dhaafo ciyaaryahanada, maxaa yeelay waa nin jimidh yar.
“Ronaldo,dhinaca kale, waa nin sida Mishiinka u shaqeeya. Waxaanu u muuqdaa mid dhinac kasta ka dhamaystiran. Wuxuu kubada ku kaxeeyaa awood caqli ku jiro, had iyo jeerna wuxuu u toogtaa goolka sida ugu fiican. Labadooduba waa isku derejo.”
“Laakiin anigu waxaan aad ula dhacaa Andres Iniesta si weyn. Waa ciyaaryahan ugu fikira kubada si ka saraysa oo ka degdeg badan si kastoo ciyaaryahan ugu fikiro kubad, oo bixiya baasas ka aadan malayn karin.
“Wuxuu sameeyaa waxyaabo aadan ka fisheen ciyaaryahan inuu samayn karo. Wuxuu talaabada macquulka ah ka arkaa meel aan cid kale ka arki karin. Mana aha oo kaliya qaabka uu u ciyaarayo kubada, ee xataa qaabka uu u nool yahay baa ku cajab gallinaysa. Waa shaqsi mar walba degen.”
Xulka Kubadda Cagta Gobollka Xaysimo Oo 2-0 Ku Garaacay Badhan – (Daawo Sawirro)
06/10/2015 Samatar Mohamed
United, Chelsea, Arsenal iyo City oo Tartan Ugu jira Ciyaartoy Sannado Ka Hor Ka Tegay Old Trafford
Diego Simeone Oo Xiisaynaya In Uu Tababare U Noqdo Manchester City
12/12/2014 Abdiwahab Ahmed